Journey of Life | about my feelings, my thoughts, my dreams
ဤသို့သော သစ်ခက်သစ်လက်မျိုးများကို ချိုးပြီးသောအခါ
လာမယ့် နှစ်ပေါင်း ၄၀၊
လာမယ့် လပေါင်း ၄၀၊
လာမယ့် ရက်ပေါင်း ၄၀၊
မသေချာသောအရပ်ကို သံလိုက်အိမ်မြှောင်လို သေချာနေတယ်
၂၀၁၀ရဲ့ လူနေညများကိုတွေးရပါမယ် ဘုရား…..။
ဒီနေ့ညလသာကြောင်း အနည်းဆုံးအသိနဲ့ ကျွန်တော်သိပါတယ်။	။
(Sun) October 4, 2009
March 4, 2010 at 5:50 pm	3 comments
OK ဘယ်က စဖြစ်တာလဲ…???
OK ဘယ်က လာတာလဲ…
ကမ္ဘာပေါ်မှာ သန်းပေါင်းများစွာသော သူများက OK စကားလုံးကို သုံးကြတယ်… OK ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် က “agreement” ဒါမှမဟုတ် “approval” လို့အဓိပ္ပာယ် ရတယ်… Chotaw လို့ ခေါ်တဲ့ Native American Indian လူမျိုးစု မှ ဆင်းသက်လာတယ်လို့ ဆိုကြတယ်… Chotaw စကားဖြစ်သော “okeh” အဓိပ္ပာယ် က အမေရိကန် စကားလုံး နဲ့ အဓိပ္ပာယ် တူတယ်… ၁၉ ရာစုနှစ်က “Choctaw” ဘာသာစကားကို အနောက်အမေရိကန် မှာသုံးစွဲ ခဲ့တယ် လို့ကျွမ်းကျင်သူများက ဆိုသည်။ အထက်ပါ အချက်နဲ့ ပတ်သတ်လို့ ယခုထိငြင်းခုံနေကြဆဲဖြစ်သည်။
ဘာသာစကားရေးရာကျွမ်းကျင်သူ Allen Walker Read ရေးသော “OK” အကြောင်းစာတမ်းကို ၁၉၆၀ ခုနှစ်ကထုတ်ဝေခဲ့သည်။ သူက ၁၈၃၀ နှစ်များဆီက တည်းက သုံးစွဲခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ “all correct” ကိုအတိုကောက်ရေးချင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ အချို့သော နိုင်ငံခြားသားများက “all correct” ကို “o-l-l k-o-r-r-e-c-t” ဟုရေးရာမှ “OK” ဟုဖြစ်လာသည်ဟုဆိုသည်။
အချို့သောသူများက မီးရထား အလုပ်သမား Obadiah Kelly ကတီထွင်ခဲ့သည်ဟုဆိုကြသည်။ သူ့နာမည် အတိုကောက်စာလုံးဖြစ်သော “O နှင့် K” ကို ရထားနှင့်ပို့ပေးသော သူ၏ ပစ္စည်းများပေးပို့ရာတွင် ရေးလေ့ ရှိသည်ဟုဆိုသည်။
အချို့သော သူများ ကတော့ နိုင်ငံရေးပါတီ တစ်ခုမှ တီထွင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ၁၈၄၀ ခုနှစ်က သမ္မတ Martin Van Buren ကိုထောက်ပံ့သော အဖွဲ့က သူတို့ အဖွဲ့ကို “OK club” ဟုခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ Martin Van Buren မွေးဖွားရာဇာတိဖြစ်သော New York ပြည်နယ်၊ Old Kinderhook မှ “OK” ကိုယူထားချင်း ဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါ အချက်ကို မည်သူမျှ သဘော မတူခဲ့ကြသော်လည်း ကျွမ်းကျင်သူအချို့ က အဆိုပါစကားသည် အမေရိကန် စစ်စစ် စကားဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။ ထိုမှ တဆင့် တစ်ကမ္ဘာ လုံး နီးပါးသို့ ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
အခြားဖော်ပြချက်တစ်ခု မှာ “A-OK” ဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ “Everything is fine” ဖြစ်သည်။ အာကာသ ခေတ်စကားဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် “Astronaut Alan Shepard” ကစတင်သုံးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည် အာကာသထဲ သို့ ပထမဆုံးသွားရောက်သော အမေရိကန်လူမျိုးဖြစ်သည်။ သူက အစီအစဉ်အတိုင်း သမုဒ္ဒရာအတွင်းသို့ ဆင်းသက်နိုင်ခဲ့ခြင်းကို “Everything is A-OK” ဟု သတင်းပို့ခဲ့သည်။ အချို့သော ကျွမ်းကျင်သူများကတော့ ထိုမှ ဆင်းသက်လာခြင်းမဟုတ်ဟုဆိုသည်။ တယ်လီဖုန်းစတင် အသုံးပြုသောခေတ်များဆီက တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာ က လက်ခံရှိခဲ့သော သတင်းစကားဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။
အချို့သောသူများက “OK” အား “okey-dokey” သို့မဟုတ် “okey-doke” ဟုလည်း သုံးနှုံးကြသည်။ ၁၉၃၀ ခုနှစ်များက စတင်သုံးစွဲခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။ ယနေ့ခတ် တွင် အမေရိကန် တီဗွီအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သော “The Simpsons” မှသရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်က “okely-dokely” ဟုသုံးခဲ့သည်။
အသေးစိတ်ကို ဒီမှာ ဖတ်ပါ…
March 4, 2010 at 5:39 pm	1 comment
အဲဒီမှာ ငါတို့တကယ် ခွဲခွာရခြင်းသင်္ချိုင်းကို
ရှင့်ကို ကျွန်မသိပ်ချစ်တယ်ဆိုတာရဲ့ သင်္ကေတ
အဲလို ပစ်ပစ်ချခံရတိုင်းလည်း မင်းကိုလွမ်းလို့
တခါတလေတော့လည်း ရယ်ရသား… ကွယ်။
နေ့တွေက မောင့်ကိုလာလာပြောနေတယ် …ငယ်ချစ်ရေ။
အချစ်ရယ် မင်းလက်ကို ကိုယ်ထွေးဆုပ်ထားတဲ့အခါ
ကိုယ်လည်း မင်းနဲ့ထပ်တူ ခံစားနေရတယ်ဆိုတာ
အခု ည ၉း၁၅ နာရီ
အခုတော့ အခြေမခိုင် ရွက်မပိုင်
ဟူးခနဲ့ ဖယောင်တိုင်လေး မင်းမှုတ်လိုက်
ပြုံးမြမြလေး ကိတ်မုန့် မင်းကိုက်လိုက်
ဒါဘဝဘဲ၊ ဒါမွေးနေ့ဘဲ၊ ဒါပြီးဆုံးခြင်းတစ်ခုပဲ၊
(Fri) July 24, 2009.
March 4, 2010 at 1:30 am	Leaveacomment
“အဘိုကြီးအို လေးဆိုတဲ့ သီချင်း”
နင်နဲ့ တွဲကမယ့် အိပ်မက်ရှည်ရှည်ပေါ့
ငါ့မလဲ နင့်အကြောင်းမပါရင် ကဗျာမဖြစ်…
နင် သိပ်လှလှလာတယ်ကောင်မလေးရယ်….တဲ့။ ။
(ကြာသာပတေး) ဇန်နဝါရီ ၂၈၊ ၂၀၁၀။
၀၇း၄၉နာရီ
January 28, 2010 at 4:39 pm	4 comments
ချစ်ခြင်းတရားမှာတောင် အခုဆို ခြေရာမကျန်အောင်
(Sun) November 8, 2009
January 24, 2010 at 12:00 pm	1 comment
နင့်အကို ဘာယတြာမှ မချေခဲ့မိပါလေ…
အမြတ်အစွန်းကတော့ ကြီးမားထွားကြိုင်းနေဆဲဟ…။ ။
(Mon) Jan 18, 2010
January 20, 2010 at 1:04 pm	1 comment
ကောင်လေး၊၊၊၊၊၊၊၊၊ “နင်ဟာ ငါ့ရဲ့ကောင်းကင်ပါ ဟန်နီရယ်”
ကောင်မလေး၊၊၊၊၊ “ဟာ… ငါနင့်ရဲ့ကောင်းကင်မဖြစ်ချင်ဘူး”
ကောင်လေး၊၊၊၊၊၊၊ “ ငါနင့်ကို တကယ်ချစ်တာပါ… နင်ငါ့ကို မချစ်ဘူးလား?”
ကောင်မလေး။။။ “ချစ်တာပေါ့… ချစ်လို့ နင့်ရဲ့ကောင်းကင် မဖြစ်ချင်တာ”
ကောင်လေး။။။။ “ အမ်”
ကောင်မလေး၊၊၊၊ “ဟုတ်တယ်…ငါ က နင့်ကောင်းကင် ဆိုရင် နင့်ကောင်းကင် က အမြဲ မိုးအုံ့ နေမှာပေါ့.. ငါ က အသားမဲ တာကိုးဟ….”
January 19, 2010 at 1:45 pm	2 comments
CMU' s Diary